COUNTER-STRIKE 1.6 एनिमे संस्करण ► Counter Strike 1.6 डाउनलोड
CS 1.6 एनिमे संस्करण
Counter Strike संसारभरि धेरै प्रशंसकहरू भएको खेल हो। युवा र ठूला खेलाडीहरू मन पराउँछन् Counter Strike. र यदि तपाईं पनि यो खेल खेल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नुपर्छ डाउनलोड counter-strike 1.6 हाम्रो वेबसाइट बाट।
डाउनलोड cs 1.6 हाम्रो वेबसाइटबाट धेरै कारणका लागि राम्रो निर्णय हो। पहिलो, तपाईं सक्नुहुन्छ डाउनलोड काउन्टर - स्ट्राइक 1.6 धेरै छिटो - तपाईलाई त्यो गर्नको लागि मात्र5मिनेट चाहिन्छ। दोस्रो, डाउनलोड cs 1.6 हाम्रो वेबसाइटबाट धेरै सुरक्षित छ। र निस्सन्देह, हामी यो हो भनेर सम्झन चाहन्छौं निःशुल्क डाउनलोड counter strike.
नि: शुल्क डाउनलोड सीएस हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्ने सबैको लागि हो। र पक्कै पनि यो भन्न महत्त्वपूर्ण छ, कि डाउनलोड संख्या अनुसार, हामी देख्न सक्छौं, त्यो Counter Strike संसारका धेरै मानिसहरूको लागि उत्तम विकल्प हो।
हाम्रो वेबसाइट मा तपाईं सक्नुहुन्छ डाउनलोड cs 1.6 मूल संस्करण। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ, संसारमा धेरै मानिसहरू जापानी कार्टुन मन पराउँछन्। त्यसोभए, यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले प्रयास गर्नुपर्छ cs 1.6 एनिमे संस्करण। जापानी कार्टुन को शैली मा खेल को यो संस्करण। यस संस्करणमा तपाईले नयाँ चीजहरू जस्तै मोडेल, स्किन, बनावट, प्रभाव, ध्वनि, स्प्राइटहरू पाउनुहुनेछ। साथै, तपाईंले सुन्नुहुनेछ र अद्भुत साउन्डट्र्याक, जुन, तपाईंले जापान ल्याउनुहुनेछ।
खेलका अन्य सुविधाहरू: एनिमे वातावरण र डिजाइन; एनिमे HD प्लेयर मोडेलहरू; एनिमे HD हतियार छाला; एनिमे HD नक्शा बनावट; एनिमे स्प्राइट्स र प्रभावहरू।
र यदि त्यस पछि, तपाईले मूल संस्करण छुटाउनुहुनेछ, तर तपाईको कम्प्युटरमा यो छैन, बस सीएस डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट बाट। नि: शुल्क डाउनलोड counter strike आफ्नो पैसा बचत हुनेछ। त्यसैले, मजा लिनुहोस् निःशुल्क डाउनलोड र राम्रो समयको आनन्द लिनुहोस्।